June 2018 - Daily Lokmandu
दिमागबाट कसरी निस्कन्छन् यस्ता जुक्ती ? हेर्नुहोस् हाँसो लाग्ने केही तस्विर
June 30, 2018 Comments Off on दिमागबाट कसरी निस्कन्छन् यस्ता जुक्ती ? हेर्नुहोस् हाँसो लाग्ने केही तस्विर
मानिसको दिगमाबाट कस्ता कस्ता जुक्ती निस्कँछन् ? कुनैले देश हाँकेका छन्, कुनै विश्वमा राज गरेका छन् त कसैले ठूला–ठूला अविष्कार गरेका छन् । यती मात्रै होइन् मानिसले अक्सर यस्ता जुक्ति निकाल्छन्, जुन निकै वकवास खालका [ पुरा पढ्नुहोस ]
महिलालाई नाङ्गै पारी कुट्नेलाई जेलमा कोचियो , मानिसहरु पनि कति निर्दयी भएका हुन [भिडियो हेर्नुहोस ]
June 30, 2018 Comments Off on महिलालाई नाङ्गै पारी कुट्नेलाई जेलमा कोचियो , मानिसहरु पनि कति निर्दयी भएका हुन [भिडियो हेर्नुहोस ]
अर्घाखाँचीकी दिलमाया पुनलाई सडकमा ल्याएर नाङ्गै बनाई निर्घात कुटपिट गर्ने दाङका दुई महिलालाई जरिवानासहित जेल चलान गरिएको छ । जेठ २५ गते अर्घाखाँची जिल्ला सितगंगा नगरपालिका–९ ठाडोखोलाकी दिलमाया पुन मगरलाई कपडा च्यातेर निर्मम कुटपिट गर्ने [ पुरा पढ्नुहोस ]
June 30, 2018 Comments Off on क्यान्सर, डायबिटीज पेट सम्बन्धि रोगको अचुक औषधी “सखरखण्डको पात”
क्यान्सर, डायबिटीज पेट सम्बन्धि रोगको अचुक औषधी “सखरखण्डको पात” लगभग धेरै जनालाई सखरखण्डका फाइदाहरुको बारेमा थाहा होला तर तपाईंलाई सखरखण्डका यी गुणको बारेमा थाहा छ ,यदि छैन भने हामी तपाईलाई बताउछौस् सखरखण्डको पातले स्वास्थ्यमा हुने [ पुरा पढ्नुहोस ]
भर्खरै बागलुङ बाट आयो ठुलो दुखद खबर : तपाईंको सहयोगको खाचो
June 30, 2018 Comments Off on भर्खरै बागलुङ बाट आयो ठुलो दुखद खबर : तपाईंको सहयोगको खाचो
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले कार्यालयको आधारिकारिक फेसबुकमा पहिचान नखुलेकी एक जना महिलाको शवको तस्वीर पोष्ट गरी मृतकका आफन्त कोहि भए जिप्रका बागलुङमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार हिँजो साबिक [ पुरा पढ्नुहोस ]
June 30, 2018 Comments Off on धामीले सिंगो बस्तीका सवैको मृत्यु तोकिदिएपछि… हाम्रै नेपालमा यस्तो सम्म भयो
प्रेम सुनार/असार–१६, गुल्मी । टिनले छाएका चिटिक्क परेका घरहरु थिए । हराभरा जमिन । गोठहरु पनि त्यस्तै । सुधारिएको दलित बस्तीको सभ्यता । नमुना दलित बस्ती पनि भन्ने गर्दथे अन्य समुदायले । गत वर्षकोको कुरा [ पुरा पढ्नुहोस ]
June 30, 2018 Comments Off on यही हो नेपालको स्वर्ग जहाँ पुगेपछी पर्यटक छाती पिटेर रुने गर्दछन् ! (मर्नु अघी घुम्नै पर्ने ठाउ)
यही हो नेपालको स्वर्ग जहाँ पुगेपछी पर्यटक छाती पिटेर रुने गर्दछन् ! (मर्नु अघी घुम्नै पर्ने ठाउ) काठमाडौँ : कुल क्षेत्रफल २,२४६ वर्ग कि.मी. ओगटेको यस जिल्लाको सिमाना पूर्वमा गोरखा र लमजुङ, पश्चिममा मुस्ताङ र [ पुरा पढ्नुहोस ]
June 30, 2018 Comments Off on दादको समस्या बाट ७ दिनमै गायव गर्ने घरेलु औषधी
सयपत्री एउटा फूलको प्रजाति हो । यो फूल नेपालको प्रसिद्ध फूल हो । सयपत्री फूलको प्रयोग १७ औं शताब्दीदेखि मात्र भएको मानिन्छ । नेपालमा तिहारका बेला विशेष रूपमा प्रयोग हुने सयपत्री फुलका अनेकौ फाइदा छन् [ पुरा पढ्नुहोस ]
सर्पको सेक्स गर्ने तरिका बुझेपछि अचम्ममा पर्नुहुनेछ तपाईं ! पोथीले एकसाथ थुप्रै सेक्स पार्टनर किन छान्ने गर्दछ ?
June 30, 2018 Comments Off on सर्पको सेक्स गर्ने तरिका बुझेपछि अचम्ममा पर्नुहुनेछ तपाईं ! पोथीले एकसाथ थुप्रै सेक्स पार्टनर किन छान्ने गर्दछ ?
सेक्स संसारको सबैभन्दा जटिल मसला हो । प्रकृतिले यसलाई यति जटिल बनाएको छ जसबारे जति अनुसन्धान गर्यो त्यती नै नयाँपन देखिन्छ भने त्यति नै अचम्मित गरिदिने तथ्य सार्वजनिक हुन्छन् । हरेक जीवसँग सेक्सको तरिका, दृष्टिकोण, [ पुरा पढ्नुहोस ]
दहीसँग यी ५ चिज कहिल्यै नखानुस नत्र मृत्यु समेत हुनसक्छ !
June 30, 2018 Comments Off on दहीसँग यी ५ चिज कहिल्यै नखानुस नत्र मृत्यु समेत हुनसक्छ !
गर्मीको स्वादिलो परिकार हो दही । दहीको खपत गर्मी मौसममा निकै बढ्छ । शीतल स्वभावको भएकाले दही तथा दहीबाट बनाइने मट्ठा, मोही आदिलाई गर्मी मौसममा निकै रुचाइन्छ । दही स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ तर [ पुरा पढ्नुहोस ]